TDSY5150 | Infinite-Electronic.hk ထံမှရရှိနိုင် Vishay / Semiconductor - Opto Division TDSY5150 စတော့အိတ် | Infinite-Electronic.hk မှာအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အတူ TDSY5150
နေအိမ်ထုတ်ကုန်များoptoelectronicsdisplay မော်ဂျူးများ - LED အက္ခရာနှင့်ဂဏန်းTDSY5150
DISPLAY 7-SEG. 13MM YELLOW C.A.-
91511 pcs stock
In Stock 91511 pcs
Character LED Display Module Yellow 7-Segment 1 Character Common Anode 2.4V 20mA 0.689" H x 0.482" W x 0.252" D (17.50mm x 12.25mm x 6.40mm) 10-DIP (0.600", 15.24mm)
Vishay / Semiconductor - Opto Division TDSY5150
TDSY5150 PDF ကို Datasheet
TDSY5150 ဒေါင်းလုပ် Datasheet
Vishay / Semiconductor - Opto Division TDSY5150 Buy
Vishay / Semiconductor - Opto Division ပေးသွင်း
Vishay / Semiconductor - Opto Division ဖြန့်ဖြူး
ဖေါ်ပြချက်: DISPLAY 7-SEG. 10MM YELLOW C.A.-
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 87797 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DISPLAY 7-SEG. 10MM RED LC C.C.-
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 56380 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DISPLAY 7-SEG. 7MM YELLOW C.A.
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 122814 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DISPLAY 7-SEG. 7MM YELLOW C.C.
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 118464 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 93646 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 107090 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DISPLAY 7-SEG. 13MM RED LC C.C.-
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 111118 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DISPLAY 7-SEG. 13MM RED LC C.A.-
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 51456 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 121055 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DISPLAY 7-SEG. 13MM YELLOW C.C.-
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 92271 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 47055 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DISPLAY 7-SEG. 10MM YELLOW C.C.-
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 84999 pcs